Amagama anesibongo Nagarajan
Okubalulekile Ukuhambisana ngamagama Ukuhambisana nama-surname Amagama nge Nagarajan
Amagama aphezulu, amagama adumile kunazo zonke nesibongo Nagarajan.
Amagama avame kakhulu ngesibongo Nagarajan
Wonke amagama anegama Nagarajan
AmaSurnames namagama abantu abanesibongo Nagarajan
Okuningi mayelana nesibongo Nagarajan
Iyini Nagarajan isho ukuthini? Incazelo yesibongo Nagarajan.
Nagarajan ukuhambelana ngamagama
Nagarajan ukuhlolwa kokuhambisana namagama.
Nagarajan ukuhambisana namanye amagama
Nagarajan ukuhlolwa kokuhambisana namanye amagama.
Amagama ahamba ne- Nagarajan